rakiban Calculator 1
Dhexroor ee waalka, mm
Dhererka dhengedihii of, mitir
Number of boosteejada
miisaanka guud ee xoojino, kg
Qiimaha halkii tan
Xisaabi miisaanka guud ee filtarka ah, tirada guud ee size, miisaanka hal mitir iyo mid ul of xoojinta.
From dhexroorka yaqaan iyo cimri dheer xoojinta.
rakiban calculator 2
Xisaabi dhererka guud ee xoojinta, ay baaxadda iyo tirada baararka xoojin ah oo miisaankiisu yahay hal mitir iyo mid ul.
From dhexroorka yaqaan iyo miisaanka guud ee waalka.
Xisaabinta ku salaysan yahay miisaanka mid steel mitir cubic 7850 kg.
Xisaabinta armature dhismaha guriga
Inta lagu guda jiro dhismaha guriga waa mid aad u muhiim ah in si sax ah loo xisaabiyo qadarka xoojinta aasaas ah. Si tan loo sameeyo waxay kaa caawin doonaa barnaamijka. Isticmaalka filtarka calculator waxay noqon kartaa, iyagoo og ee miisaanka iyo dhererka ul in la ogaado miisaanka guud ee aad u baahan tahay xoojinta, ama tirada loo baahan yahay ulo iyo dhererka guud. Xogtan ayaa kaa caawin doontaa in si fudud oo dhaqso loo xisaabiyo qadarka xoojinta loo baahan yahay in la sameeyo shaqadaada.
Xisaabinta rakiban noocyada kala duwan ee aasaaska
Si loo xisaabiyo xoojinta sidoo kale waa in ay ogaadaan nooca guriga iyo dhulka hoostiisa. Halkan, waxaa jira laba kala duwanaansho caadi ah. bulukeeti iyo strip Tani aasaaska.
Rakiban aasaas bulukeeti
aasaaska bulukeeti waxaa loo isticmaalaa meesha on carradu heaving ayaa loo baahan yahay si loo soo dajiyo la taaban karo ka culus ama guri ka mid ah leben la guntooda la taaban karo mass weyn. Xaaladdan oo aasaas u baahan tahay xoojinta. Waxaa lagu sameeyaa laba qaybood, kuwaasoo mid walba uu ka kooban yahay laba lakab oo dhengedihii dadab iyo in ay midba midka kale.
Tixgeli ay dhacdo xisaab ah xoojinta for guntooda, dhererka qaybta taas oo 5 mitir. dhengedihii Xoojinta waxaa la geeyaa meel fog of 20 cm midba midka kale ka. Sidaas awgeed, waayo hal dhinac u baahan doontaa 25 ulo gudban. At cidhifyada baararka waslad khafiif ah oo aan la kaalinta, ka dibna, waa 23.
Haddaba, og tirada ulood, iyagoo dhererka loo xisaabin karaa. Waa in la ogaadaa waa in khaanadaha dhengedihii ma gaadhi geesaha 20 cm, iyo, Sidaa darteed, ku salaysan dhererka saxanka, dhererka ul kasta oo noqon doona 460 cm. lakabka Transverse, in waslad khafiif ah oo uu leeyahay qaab square la mid noqon doonaa. Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin si ay u xisaabiso tirada rakiban looga baahan yahay in ay ku xidhmaan labada aag.
Qabtaan in masaafada u dhexeysa suumanka 23 cm. Xaaladdan oo kale, mid ka mid ah kicinta u dhaxeeya yeelan doontaa dherer of 25 cm, tan iyo markii laba sentimitir inuu ka tago Buur rakiban. Xuubabkoodu noocan doono kiiskan 23 ee tirada, tan iyo markii ay ka samaysan yihiin in gacanta isgoyska of kasta suumanka xoojinta. Iyada oo data, waxaan sii wadi kartaa in aad xisaabinta iyadoo la isticmaalayo barnaamijka.
Rakiban aasaas strip
aasaaska Strip waxaa loo isticmaalaa meesha dhulka aan aad u deggan qabanayaa Wadda House adag. Waa aasaaska ka cajalad ah oo la taaban karo la taaban karo ama lagu xoojiyey in kala hareeraha wareega ah ee dhismaha iyo hoos darbiyada ugu weyn load-sita sameeyey. Xoojinta aasaaska ayaa sidoo kale soo saaray in 2 qaybood, laakiin u gaarka loo gurmado aasaaska strip waxaa ku mahad gubtay badan ka yar iyo, sidaas awgeed, waxay ku kici doona in ka yar.
Xeerarka xoojinta khariidad ku saabsan la mid ah sida aasaas bulukeeti ah. dhengedihii Kaliya waa in ay joojiyaan in 30-40 cm ka rukunka. Oo kicinta kasta waa at 2-4 cm inuu u doodo usha on taas oo been. Xisaabinta jumpers toosan sameeyo mabda'a isku mid sida xisaabinta of dhererka loo baahan yahay xoojinta aasaas bulukeeti.
Waxaad ogaataa in labadaan kiisaska koowaad iyo labaad filtarka waa in la qaataa la margin ah ugu yaraan 2-5 boqolkiiba.